Patient safety first လူနာမျက်နှာကြည့်ကြပါ ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
Patient safety first လူနာမျက်နှာကြည့်ကြပါ
Author: lubo601 | 10:53 PM | No မှတ်ချက် |
Yin Aye Yin On line ပေါ်မှာ ဆေးအတုကြော်ငြာတွေ ပွထနေတာဘဲဆရာ။ ပိန်ဆေးတစ်ခု Japan ဆေးစစ်စစ် 100% လို့ကြော်ငြာထားလို့ ဂျပန်ဘားကုတ်လေး တင်ပြပေးပါလို့ ရေးမိတယ်။ ပစ္စည်းပေါ်က စတစ်ကာကြီးပြပေးတယ်။ မဟုတ်ဘူးလေ ဘားကုတ်ဆိုတာ ဒါမျိူးပါဆိုပြီး 49 နဲ့ စတဲ့ made in Japan ဘားကုတ်တစ်ခု ပြန်ပြလိုက်တော့ ကျမရဲ့ ကွန်မန့်တွေ အကုန်ဖျက်ခံလိုက်ရတယ်။ မသိတဲ့သူတွေကတော့ ဝယ်ဘို့မေးမြန်းနေကြတယ်။ အူယားလိုက်တာ။ ထပ်မပြောရဲတော့ဘူး။ သူများစီးပွားရေး ဖျက်စီးတယ်ဆိုပြီး ဆဲခံရမှာကြောက်လို့။
အင်တာနက်ကနေ ဆေးဝယ်ယူသုံးစွဲသူတွေသိဘို့ရာ ဆေးဝါးနဲ့အစားအသောက်အာဏာပိုင်အဖွဲ့ DFA ကနေ သတိပေးချက်တွေ ထုတ်ထားပါတယ်။ အရူးလုပ်မခံရပါစေနဲ့လို့နဲ့ စထားပါတယ်။
ဆရာဝန်လက်မှတ်နဲ့သာရောင်းဘို့ သတ်မှတ်တဲ့ ဆေးတွေကို အဲလိုဝယ်ရင် ဆေးအမှန်ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်။ ဝဘ်ဆိုက်တွေထဲမှာ တရားဝင်တွေရော၊ Rogue sites အင်တွေပါရှိတယ်။ ကြည့်လိုက်ရင်တော့ တရားဝင်လိုလို၊ ပညာရှင်ဆန်သလိုလို ထင်ရပေမယ့် တကယ်မဟုတ်တာတွေ ရှိတယ်။ အဲလိုဆိုက်တွေက တရားမဝင်ဆေးတွေလည်း ရောင်းတယ်။ ဒါ့ပြင် ဆေးထဲမှာ ပါသင့်တာတွေကို နည်းပြီးဖြစ်ဖြစ် များပြီးဖြစ်ဖြစ်ပါနေနိုင်တယ်။ ဥပမာ တုပ်ကွေးဆေး Tamiflu (oseltamivir) ကိုဝယ်ပြီး လေ့လာမှုလုပ်တယ်။ talc ပေါင်ဒါ၊ acetaminophen ပါရာစီတမော စတာတွေ ပါနေတာတွေ့ရတယ်။ Ambien (zolpidem tartrate), Xanax (alprazolam), Lexapro (escitalopram oxalate) နဲ့ Ativan (lorazepam) ဆေးတွေကိုလည်း ရောင်းနေ ဝယ်နေကြတာတွေ့ရှိရတယ်။ တခြားတိုင်းပြည်ကသွင်းတဲ့ Haldol (haloperidol) စိတ်ရောဂါဆေးကို သောက်မိရင် ချက်ချင်းဆေးရုံတက်ရနိုင်ပါတယ်။
ယုံကြည်စိတ်ချရမယ့် ဝဘ်ဆိုက်ဆိုတာ လိုင်စင်ကို ဆေးဝါးဘုတ်အဖွဲ့က ရထားတာဖြစ်ရမယ်။ ဆက်သွယ်လိပ်စာ အတိအကျနဲ့ အပြည့်အစုံဖေါ်ပြထားရမယ်။ ဝဘ်ဆိုက်အတုဆိုတာ ဆေးဈေနှုန်းတိတိကျကျဖေါ်ပြမထားတာ၊ ဆရာဝန်လက်မှတ်ဆေးပါ ရောင်းပေးမယ်ဆိုတာ၊ ဆက်သွယ်လိပ်စာ အပြည့်အစုံဖေါ်ပြမထားတာ။
ဆေးအတုဆိုတာ ဆေးထဲမှာပါရမှာမဟုတ်တာတွေပါတာ၊ ဆေးအလေးချိန် နည်းတာ-များတာ၊ FDA အသိအမှတ်ပြုဆေး မဟုတ်တာ၊ ရက်စွဲလွန်နေတာ စတာတွေဖြစ်တယ်။ ပိန်ဆေးဆိုတာ အတုတွေနဲ့ သုံးစွဲဘို့ မသင်တာတွေက များတယ်။ ဥပမာ Xenical ဆေးထဲမှာ တားမြစ်ထားတဲ့ Orlistat ဆေးတွေပါနေတာတွေ့ရှိရတယ်။ Sibutramine တွေပါနေတယ်။ အခုထိရေးတာတွေက အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု FDA က သတိပေးချက်တွေဖြစ်တယ်။
မြန်မာပြည်မှာ ပိုပြီးအန္တရာယ်ကြီးတယ်ထင်ပါတယ်။ (အင်တာနက်)၊ (ဖေ့စ်ဘွတ်)၊ ဂျာနယ်၊ တီဗွီ၊ သတင်းစာစတဲ့ မီဒီယာ အကုန်ကနေ ဆေးရောင်းနေကြတယ်။ ဆေးကြော်ငြာတွေက ဆွဲဆောင်မှုဦးစားပေးထားတယ်။ သည်းခြေကြိုက်ဆေးတွေ ရောင်းတယ်။ ကျွန်တော်တော့ ပျောက်တယ်။ ကျမတော့ ယူပြစ်လိုက်သလိုပဲ၊ မော်ဒယ်တွေကို ပြောခိုင်းထားတယ်။ အသားဖြူဆေးကြော်ငြာပုံမှာ ဆေးမပေါ်ခင်ကတည်က ဖြူပြီးသား မိန်းကလေးပုံပါမယ်။
အပျိုပြန်ဖြစ်ဆေးတွေနဲ့ ယောက်ျားတွေက လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ အလွန်မေးတယ်။ နေ့တိုင်းလိုလိုပါပဲ။ ဒီစာရေးနေရင်း လာပါတယ်။ အခုခေတ်စားနေသော Thai မှထုတ်သော MY GLUTA Dietary supplement product တို့ကို သောက်ရင် side effect ဆိုးဆိုးရွားရွားရှိနိုင်ပါသလား။ အဲ့ဆေးတွေက အမာရွတ်တွေပါမှေးမှိန်နိုင်ပါသလား သိချင်ပါတယ်ဆရာ။
၂၈-၂-၂ဝ၁၅ နေ့က FDA ကနေ ပိန်ဆေး (၇) မျိုးသတိပေးချက်ထုတ်ရပါတယ်။ Sibutramine နဲ့ Phenolphthalein ဓါတ်တွေရဲ့ စိုးရိမ်စရာတွေကို ဖေါ်ပြပေးထားပါတယ်။ ၇-၅-၂ဝ၁၅ နေ့က (အိုဗိုရီကို့စ်) နိုင်ငံမှာ အသားဖြူလိမ်းဆေး သတိပေးရတဲ့ သတင်းဆောင်းပါး ထွက်တယ်။ နိုက်ဂျီးရီးယားမှာ ၇၇% သောအမျိုးသမီးတွေက အသားဖြူဆေး သုံးနေကြတယ်လို့ပါတယ်။ တိုဂို ၅၉%၊ တောင်အာဖရိက ၃၅%၊ ဆီနီဂေါလ် ၂၇% နဲ့ မာလီ ၂၅% သုံးနေကြတယ်။ ၂ဝ၁၃ မှာ အိန္ဒိယဘောလီဝုဒ်မင်းသမီး (နန်ဒီတာ ဒတ်စ်) ကနေ အမည်းကလည်းလှပါတယ်ဆိုပြီး (ကင့်ပိန်း) လုပ်ရတယ်။
ကျန်းမာရေးနဲ့ဆေးပညာစာတွေရေးတာနဲ့ အမေးအဖြေတွေလုပ်ပေးတာ ကြာလေလေ ပိုသိလာလေလေ။ ယုံလွယ်ကြတာ များတယ်။ အဟုတ်ထင်သူပေါတယ်။ ကြောငြာကောင်းရင် ဆေးစွမ်းမယ်ထင်ကြတယ်။ ကြော်ငြာဆေး ဘေးတွေ့မယ်လို့ ရေးပေမယ့် ဘယ်လိုသောက်ရမလည်း မေးတယ်။ ကြော်ငြာဆေးသတိပေးစာဆိုရင် လူပိုဖတ်တယ်။ သတိပေးချက်က်ို နာယူဘို့နေနေသာသာ ဆေးဈေးနှုန်းမေးတယ်။ ဘယ်မှာဝယ်ရမလည်းမေးတယ်။
သမာအာဇီဝဖြစ်ကြစေချင်တယ်။ ကျွန်တော့်ဆေးစာတွေကို ဖေါ်ပြနိုင်တဲ့မီဒီယာ အလွန်နည်းတာကို နားလည်ပါတယ်။ အကျိုးစီးပွါးဝိရောဓိခေါ်တယ်။ ဆေးကြာ်ငြာခငွေနဲ့ ကြော်ငြာဆေးမဝယ်ရေး တွဲထည့်လို့မသင့်တာ နားလည်ပါတယ်။
(အွန်လိုင်း) မေးကြသူ တယောက်မျက်နှာကိုမှ ကျွန်တော်မမြင်ရပါ။ လူကိုယ်တိုင်ဆေးလာဝယ်သူတွေရဲ့ မျက်နှာကို ကြည့်ကြစေချင်ပါတယ်။
ကြော်ငြာဆေး အမေးတွေများလွန်းလို့ ရေးတင်ထားတာတွေရှိပါတယ်။
1. Adoxy Cellfood အမေးများတဲ့ဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2014/…/adoxy-cellfood.html
2. A-Ra collagen ထိုင်းကလာတဲ့ ကြော်ငြာဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/…/skin-whitening-injectio…
3. Baschi Pink Quick Slimming ပိန်ဆေးကြော်ငြာ http://doctortintswe.blogspot.com/…/baschi-pink-quick-slimm…
4. Commercial medicine ဆေးလှလှလေးတွေ ဝယ်ကြမလားhttp://doctortintswe.blogspot.com/…/commercial-medicine.html
5. Commercial treatments ကြော်ငြာဆေး ထပ်မေးလာ http://doctortintswe.blogspot.com/…/commercial-treatments_3…
6. Commercial ကြော်ငြာပါရစေhttp://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/commercial.html
7. FDA warns of liver injury from muscle-building supplement ကြွက်သားအားကောင်းအောင်သုံးတဲ့ဆေး သတိပေး http://doctortintswe.blogspot.com/…/fda-warns-of-liver-inju…
8. Medicine Ad ကြော်ငြာဆေးနောက်တမျိုး http://doctortintswe.blogspot.com/2015/…/medicine-ad_15.html
9. Medicine Ad ကြော်ငြာဆေးနောက်တမျိုးhttp://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/medicine-ad.html
10. Medicines for profit ကြော်ငြာဆေးနောက်တမျိုး http://doctortintswe.blogspot.com/…/medicines-for-profit_15…
11. Self-styled medicines ကြော်ငြာဆေး ဘေးဖြစ်နိုင်တယ်http://doctortintswe.blogspot.com/…/self-styled-medicines.h…
12. Skin Whitening Injection အသားဖြူဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/…/skin-whitening-injectio…
13. Skin Whitening Injection အသားဖြူဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/a-ra-collagen.html
14. Unapproved medicines ကြော်ငြာဆေးတွေ http://doctortintswe.blogspot.com/…/unapproved-medicines.ht…
15. Vimax and Breast ကျားဆေး-မဆေး ကြော်ငြာပြီးရောင်းတဲ့ဆေးhttp://doctortintswe.blogspot.com/…/12/vimax-and-breast.html
16. Virginity medicine Ad အပျိုစစ်နဲ့ ဆေးအစစ် http://doctortintswe.blogspot.com/…/virginity-medicine-ad.h…
17. Fake Medicines come from Neighbors ဆေးအတုတွေ ဘယ်ကနေလာသလဲhttp://doctortintswe.blogspot.com/…/fake-medicines-come-fro…
18. Fake medicines and China ဆေးအတုနဲ့ တရုပ်ပြည် http://doctortintswe.blogspot.com/…/fake-medicines-and-chin…
19. Fake Medicines from China and India (2) http://doctortintswe.blogspot.com/…/fake-medicines-from-chi…